Home MPITANDRINA FOOTBOLA Tantara Chris Wilder Childhood Child Plus Untold Biography Facts
LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Genius Football iray miaraka amin'ny anaram-bosotra "Ny lehiben'ny sekoly tranainy". Ny tantaranay Chris Wilder Childhood Child Plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fitsangan'i Chris Wilder. Credits sary: ​​LastSticker sy Twitter.
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany / ny fiainany, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny laza, mitombo ny laza laza, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy amin'ny fianakaviana, ny fomba fiainany sy ny zava-misy kely fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa mpitantana manana ilay antsoina hoe izy 'Dinosaur'fomba fiasa amin'ny fitantanana baolina kitra, olona nanao fahagagana tamin'ny fanaovana ny ekipa Sheffield (vidiny latsaky ny £ 1m) mahazo fiandohana tsara amin'ny vanim-potoanan'ny ligy voalohany 2019 / 2020. Na izany aza, vitsy ny mpankafy baolina kitra no mihevitra ny dikan-tsarantsika Chris Wilder Biography izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Zavam-pianakaviana sy fiainana taloha
Christopher John Wilder dia teraka tamin'ny andro faha-23 ny volana septambra 1967 tany Stocksbridge, tanàna kely sy paroasim-panjakana izay hita ao amin'ny tanànan'ny Sheffield, Angletera. Na dia teraka tao Sheffield aza, ny tompon'andraikitra amin'ny baolina kitra an'ny foko anglisy anglisy dia avy amin'ny fianakaviany avy any amin'ny tanànan'i Liverpool, Liverpool, midika izany fa izy 'Scouser'.
Nihalehibe niaraka tamin'ny ray aman-dreniny sy ny mpiray tam-po aminy i Wilder ary ny lehibe indrindra, ny dadatoany izay nanana fitaomana lehibe tamin'ny fitaizana azy. Avy amin'ny fianakavianà saranga antonony iray ampiasain'ny dadany izy izay nahazo toeram-ponenana tao amin'ny faritry ny sarangan'i Liverpool. Amin'ny mbola kely, ny dadatoan'i Wilder dia nanan-kery lehibe taminy ho tia ny lalao. Tsy nampianatra azy ny fomba hilalao baolina ny taranany, nefa nitondra azy tany Anfield mba hijery lalao Liverpool. Amin'ny teniny;
“Nankalaza ny Krismasy izahay sy ny fialantsasatry ny sekoly. Tamin'izay aho no nandeha tany Anfield niaraka tamin'ny nenitoako izay nipetraka tany amina tanàna mimanda, atsinanan'i Liverpool. Hijery azy ireo aho anisan'izany ny raiko milalao momba ny ati-dalao amin'ny baolina kitra ”
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Tamin'ny tapaky ny Fitopololahy dia nanana fahombiazana lehibe i Liverpool ary nandresy ny zava-drehetra ny fiadiana ny amboara eropeana, Tompondakan'ny Tompondakan'ny UEFA, amboara amin'ny amboara, amboara eropeana eropeana / amboara Super ÉEFA sns .... Tany amin'ny Anfield i Chris Wilder mba hiara-manadino ny sasany tamin'ireo fotoana ireo tamin'ny dadany sy ny dadatoany, ny fivoarana izay nahita azy fa tsy mila hafa afa-tsy ny ho lasa mpilalao baolina kitra.
Fony tany am-pianarana dia nankafy ny fanatanjahantena rehetra i Wilder, indrindra ny cricket. Na dia eo aza ny fihodidirana, dia mbola nifantoka foana ny mpilalao baolina kitra. Mba hanenjehana ny nofiny, Nandao an'i Liverpool tany amin'ny toerana nahaterahany tany Sheffield i Chris Wilder mba hitady ny filalaovana baolina. Niasa ho mpilalao basikety ho an'ny Stocksbridge Park Steels FC izy tao amin'ny distrikan'i Stocksbridge mankany Sheffield.
Taty aoriana dia nahazo fitsapana nahomby niaraka tamin'i Southampton i Wilder tamin'ny naha-mpisolovava baolina kitra sy mpilalao tao amin'ny Akademia. Amin'ny maha mpisava lalana fanetren-tena dia noraisiny ny manadio ny kiraro baolina kitra an'ny talen'ny Southampton- David Armstrong. Na dia nanolotra ny tsara indrindra aza izy, dia tsy afaka nandroso amin'ny alàlan'ny laharan'ny fahatanorana amin'ny baolina kitra ho an'ny zokiolona indrindra i Wilder mahantra. Mampalahelo fa navotsotra izy noho ny tsy fahampian'ny fampisehoana nefa tsy niditra tao amin'ny ekipa voalohany Southampton.
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Fiaraha-miasa amin'ny baolina kitra amin'ny famintinana
Izay mpilalao tanora rehetra niaina fandavana akademiana tsy ho fantatsika loatra ny fanaintainana ara-pihetseham-po lalina sy manimba ny vokatr'izany. Taorian'ny tsy nahavita ny kilasy ho mpilalao tao amin'ny Akademia Southampton, niverina tany Sheffield, tanàna nahaterahany ny mahantra i Wilder. Soa ihany fa nanaiky azy ho mpiaro i Sheffield United.
Na dia mpilalao tsy mihetsika aza izy dia nanampy an'i Wilder handrafitra ny asany ho an'ny zokiolona izy. Ny zazalahy taloha bola dia tsy nitady ny tenany tamin'ny ekipa voalohany an'ny fikambanana tamin'ny Aogositra 1986. Nandritra ny asany niarahany niasa tamin'ny Sheffield dia nanetry ny tenany i Wilder tamin'ny alàlan'ny fampindramam-bola niaraka tamin'ny klioba 11 talohan'ny nidirany tao Halifax Town tao 1999, ny klioba izay nahantony tamin'ny farany ny kirarony. Wilder (sary eto ambany) dia nisotro ronono tamin'ny baolina kitra tamin'ny taonany 34.
Chris Wilder nisotro ronono tamin'ny baolina kitra 34 taona. Sary: BT
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Road to Fame Story
Chris Wilder rehefa nisotro ronono dia nanomboka niditra an-tsehatra tamin'ny fitantanana ny baolina kitra tamin'ny finoana fa hanao tsaratsara kokoa izy na dia mpilalao baolina kitra tsotra aza. Izy dia nanomboka ny asan'ny mpanazatra miaraka amin'i Alfreton Town tamin'ny taona 2001. Ny fitantanana baolina kitra araka ny nantenainy dia nanomboka tamin'ny tsikera tsara. Fantatrao ve?… Tao anatin'ny 27 herinandro vitsy taorian'ny niandraiketany an'i Alfreton dia nahazo tropy efatra ny lehilahy anglisy.
Nandray ny dingana manaraka tamin'ny fitantanana azy, i Wilder dia nitantana ny Halifax mihoatra ny lalao 300 mandra-pahatongan'ny klioba tamin'ny 30 June 2008. Ny fandatsahan-drà dia nahatonga ny fifindrany tany Oxford ary taty aoriana, ny mpifaninana tamin'ny League Two Northampton, izay nitondrany azy ireo League Two titre misy teboka 99.
Fantatrao ve?… Chris Wilder nandritra ny telo volana dia tsy voaloa ny karama nandritra ny telo volana, ny fampandrosoana iray izay nahatonga ny zava-mampalahelo nampalahelo fa nidina mafy tamin'ny karatry ny tsenambarotra. Mahantra azy !!!
Chris Wilder dia nandà ny fandoavany ny karany rehefa trosa 3 volana izy. Sary: vorondolo ary fandoavam-bola haingana
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny fiainan'i Chris Wilder teo imason'ny rivo-doza dia novonjen'ny Printsy Saodiana Saudi Abdullah, tompon'ny Sheffield izay nanasa azy hitantana ny fikambanana. Tao amin'ny 12 May 2016, i Wilder dia niditra tao amin'ny klioban'ny fahazazany zazalahy, Sheffield United.
Miaraka amin'ny fanampiana ara-bola kely, Wilder dia nahazo betsaka tamin'ny fahazoana tamin'ny alàlan'ny fifindrana maimaimpoana. Nataony voalohany ny iraka voalohany nataony; "Mampahatsiaro ireo mpilalao ao an-trano". Mba hahatratrarana izany, ny tompon'andraikitra tsy misy dikany no nandrava ireo asa soratra masiaka hoe “Tongasoa eto amin'ny asa”Teo amin'ny sehatra fampiofanana club. Aminy, misy teny filamatra mandrosika kokoa sy natao ho ao an-trano ny mpilalao.
Chris Wilder tamin'ny fidirana tao Sheffield dia nandrovitra ny teny filamatra manentana ny kianja fiofanana. Sary: SuFc sy Twitter
Na eo aza ny fanombohana tamin'ny vanim-potoana voalohany, i Wilder dia nitarika ny klioba ho lasa League One Champions nahazoana ny laharana 100 tamin'ny dingana (firaketana club). Nitohy ihany ny fahombiazany taorian'ny fidirany amin'ny Tompondaka. Nandritra ny fifaninanana dia nitarika ny sisin-taniny Sheffield United i Wilder tamin'ny fandresena ho an'ny laharana faha-32 tamin'ny telo taona tao amin'ny klioba.
Ho fankatoavana ny zava-bitany dia nomena ny talen'ny LMA tamin'ny vanim-potoana 2018 / 2019. Resy i Wilder Pep Guardiola ho an'ny loka ihany na dia ny mpikarakara ny tanànan'ny Manchester aza dia nanatontosa toky an-trano.
Chris Wilder mitazona ny LMA Manager an'ny taona- 2018–19 loka. Sary: DailyMail
Taorian'ny nitondrany ny klioba nahaterahany tamin'ny ligy voalohany, dia nanomboka nanangana ny ekipany i Wilder John Lundstram, indray mandeha izay nolavin'i Everton ary mpikaroka momba ny baolina avy any Liverpool, tanànany. Ny fahalalahana mpilalao azy dia afaka nahita ny olona rehetra niditra tao anaty jigsaw Blades. Ny Wilder Sheffield United tamin'ny fotoana nanoratana dia nanaporofo fa diso ny fiarahamonina baolina kitra taorian'ny nanoloran'ny mpankafy azy sasany mafy loatra ho an'ny Ligy Premier.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia notolorana ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanavaozana paikady indrindra tany am-boalohany ny mpitantana anglisy avy ao Liverpool taorian'ny Pep Guardiola- dia misaotra indrindra hatramin'ny fanombohana mahafinaritra an'i Blades tamin'ny vanim-potoana 2019 / 2020. Ny ambiny, araka ny nambarany, dia tantara ankehitriny
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Relationship Life
I Chris Wilder dia manambady. Tany am-boalohany dia nanambady ny vadiny taloha antsoina hoe Rachel Wilder izy roa, ary samy manana zanaka vavy roa tsara tarehy ireo; Martha Wilder sy Evie Wilder. Nitaiza ny zaza raha nanohy ny raharaham-pianarany tamin'ny vadiny ny vadiny, Wild Wilder dia nitantana fivarotana akanjo Gap tany Manchester sy Sheffield.
Araka ny tatitra dia nambara fa tsy tia baolina kitra i Chris Wilder (Rachel) taloha, indraindray milomano miaraka aminy dia mijery mandritra ny ora maro ao an-tokantranon'ny fianakaviana. Raha tsiahivina dia nijery fotsiny izy rehefa nandresy ny ekipan'ny vadiny. Amin'ireo zanakavavin'i Chris Wilder, io ihany Marta izay tia fanatanjahan-tena. Evie Wilder dia mivoaka ao anaty lamaody.
Taorian'ny taona maro nanambadian'izy ireo ny fanambadian'ny ray aman-dreniny dia samy nahita ny fihenan'ny tsy fitovian'ny ray aman-dreniny i Marta sy i Evie. Nanomboka nihena ny toe-javatra ary lasa mangetaheta izany a 'Ny fisaraham-panambadiana' dia noheverina ho safidy tsara indrindra ho an'ny mpivady taloha.
Nifindra taorian'ny fisaraham-panambadiana i Chris Wilder. Rehefa afaka fotoana kelikely, dia nihaona tamin'ny vehivavy iray antsoina hoe Francesca izy izay nambarany ny fivoriana hoe 'fitia eo noho eo'. Samy niara-nanambady i Chris sy Francesca tamin'ny andro famaritana ny 2017 (31 tamin'ny Janoary 2017). Andro inona ny manambady mpikarakara ny baolina kitra !!
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Fiainana manokana
Ny fahafantaranao ny fiainam-piainan'i Chris Wilder dia hanampy anao hanana sary feno momba ny toetrany amin'ny lavitra ny asany amin'ny sehatry ny baolina kitra.
Fanombohana, i Wilder dia olona marina, izay mampiasa fomba matihanina sy mahasambatra mba hihazonana ny olona ho eo ambany fiahian'izy ireo. Mino be dia be amin'ny fahalalahana izy ary tsy handray an'izany raha tsy ekena ny fahatsorany. Raha nanao zavatra nahafaly azy ianao, faly izy hilaza aminao fa sambatra izy. Raha manao zavatra tsy mahafaly azy ianao, dia ampahafantarinao avy hatrany izany, indraindray midina aminao toa ny taonina biriky. Raha niresaka momba ny toetrany momba ny tsy fandeferana ny hakamoana, dia nilaza izy indray mandeha hoe:Ny mpiandry dia natao ho an'ny trano fisakafoanana ihany fa tsy ho an'ny mpilalao tsy mahavita ny talentany.
Ny fitiavany ho an'ny birao sy ny divay: Miresaka momba ny fiainany manokana amin'ny fomba fijery ara-tsosialy, i Chris Wilder dia nofaritan'ny maro ho olona izay mifanerasera matetika (indrindra) amin'ireo sakaizany taloha avy amin'ny trano fisotroana izay ahitany matetika ny fitadiavana labiera ankafiziny.
Mahafantatra an'i Chris Wilder Fiainana manokana lavitra ny Football. Credits sary: ​​izsearch, EveningStandards ary BT
Fantatrao ve?… Mandeha be ny divay sy ny divay miaraka amin'ireo mpanazatra mpanazatra azy ary mpilalao taloha no milatsaka tsara taorian'ny fandresena lehibe.
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fianakavian'i Chris Wilder tamin'ny fotoana nanoratana dia nipetraka tao amin'ny lalan'ny Ecclesall, lalana iray ao Sheffield, South Yorkshire, Angletera. Amin'ny fotoana anoratana, nino izy fa ny ankohonana rehetra dia manao ezaka ho an'ny tsy fahazoana ny fankatoavam-bahoaka.
Noho ny fatoram-pianakaviana, finaritra ny fianakaviany manontolo rehefa mitondra azy any Merseyside ny baolina kitra hilalao amin'i Liverpool na Everton. Izany dia satria ny lehiben'ny Sheffield United dia nampiasa ireo fotoana ireo mba hifandray indray amin'ny fianakaviany ao Liverpool. Na dia milalao an'i Everton na Liverpool aza ny ekipan'izy ireo dia mahita ny tenany hividy tapakila lalao ho an'ny sasany amin'ireo mpifanandrina aminy izay lazainy ho fianakaviana izy. Noho izany, tena milalao manokana ny filalaovana mifanohitra amin'ny ilan'ny fianakaviany satria avy any Liverpool ny dadany ary ny ankamaroan'ny fianakaviany dia mpankafy Liverpool na Everton.
Amin'ny lafiny iray, ny mpankafy Sheffield dia mbola mitaky ny fananany manokana Wilder satria izy lehibe tao amin'ny tanànany. Fantatrao ve?… Wilder matetika miaraka amina hetsi-peo 'Iray ihany ny antsika'tao amin'ny Lalan'i Bramall malalany. Izany dia satria ny mpankafy Sheffield dia tia azy ary mino izy fa fianakaviana koa izy.
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Lifestyle
Niaina fiainana ambany fanentanana i Chris Wilder na dia nahazo karama mendrika aza tamin'ny maha mpitantana azy. Raha tokony hampiasa fiara mihetsika izay azony amidy ny karamany dia aleony mandehandeha any Sheffield amin'ny fitateram-bahoaka no tsara kokoa.
Araka ny tatitra, dia indraindray, i Wilder dia mampiasa ny fijanonan'ny bus an'ny Ecclesall Road akaikin'ny tranony, famantarana izay mampiseho ny fidina amin'ny tany. Izy dia tsy isalasalana fa fanafody amin'ny fiainana lafo vidy.
Tantaran'i Chris Wilder Childhood momba ny Fahafantarana momba ny Biography Untold - Untold Facts
Mpampianatra izy indray mandeha Alex Ferguson: Fantatrao ve?… Chris Wilder nandritra ny andro fitantanana voalohany dia mpianatry ny lehiben'ny Manchester United malaza Andriamatoa Alex Ferguson.
Chris Wilder sy Alex Ferguson- Ny mpampianatra azy. Sary: SUFC
Nandritra ny fotoana nijanonany tao amin'ny Alfreton Town sy Oxford, dia handeha tany Manchester matetika i Wilder mba hijery ny talen'ny angano ho an'ny fampianarana momba ny fampianarana. Raha niresaka momba ilay zavatra niainana dia nilaza izy tamin'ny indray mandeha;
“Nanokana fotoana hanampiana ahy izy teny an-dalana. Nataony taloha izany ny tompon'andraikitra tanora anglisy sasany fa tsy izaho ihany. Toy izany ny zava-mavesatra toy izany.
Niantso an-telefaonina izy ny alina talohan'ny fampidiran-dresaka tamin'ny lalao fampiroboroboana an'i Oxford [tamin'i York tao 2010] ary nandefa toro-hevitra vitsivitsy izay nanampy ahy hahazo ny fandresena. ”
fivavahana: Chris Wilder sahala amin'ny fianakaviana Liverpool marobe fa inoana fa avy amin'ny fianakaviana kristianina. Na izany aza, misy ny ampahany na tsy misy famantarana ny fifikirany amin'ny fivavahana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny famakiana ny tantaran'ny Chris Wilder Childhood Story miampy Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
David Beckham Tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa